Morocco machibidoro ụgbọ elu UK, Germany na Netherlands n'ihi mmụba ọhụrụ COVID-19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Morocco » Morocco machibidoro ụgbọ elu UK, Germany na Netherlands n'ihi mmụba ọhụrụ COVID-19
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ na -agbasa na Morocco • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa
Morocco machibidoro ụgbọ elu UK niile n'ihi mmụba COVID-19 na Britain.
N'ime izu abụọ gara aga, United Kingdom akọpụtala ikpe COVID-19 ọhụrụ karịa France, Germany, Italy na Spain jikọtara ọnụ.
Morocco machibidoro ụgbọ elu na-abata na UK maka ọnọdụ COVID-19 na-akawanye njọ na Great Britain
Ndị ọrụ ụgbọ elu Britain EasyJet akagbuola njem njem si UK gaa Morocco ruo Nọvemba 30.
Nnukwu onye ọrụ ezumike Britain TUI na ndị ahịa na -arụkọ ọrụ ịhazi ọpụpụ ha na Morocco.
Gọọmentị Moroccan kwupụtara na a kwụsịtụrụ ụgbọ elu niile na -aga ma na -abata na UK, Netherlands, na Germany ka ọ ga -amalite n'etiti abalị na Wednesde.
Ndị ọrụ gọọmentị na Rabat kwuru na etinyere mmachibido ụgbọ elu UK n'ihi ọnụ ọgụgụ na-arị elu nke ọrịa COVID-19 ọhụrụ na Great Britain.
Ntugharị a, nke ga -amalite na 23: 59GMT na Wenezde, ụlọ ọrụ ọdụ ụgbọ elu mba Morocco kwadoro, nke dọrọ aka ná ntị na ọ ga -anọ ebe 'ruo mgbe amara ọzọ.
Mkpebi gọọmentị machibidoro njem nwere ike imetụta ezinụlọ dị na England na Wales na-eme atụmatụ ịga ebe ndị njem ama ama maka ndị Britain n'oge ezumike ọkara oge, nke ga-amalite n'izu na-abịa.
Onye agha Britain EasyJet, nke na -agba ụgbọ elu n'etiti Europe na Morocco, kagbuo njem njem si UK gaa Morocco ruo Nọvemba 30.
EasyJet ya na gọọmentị Moroko na -akparịta maka inye ụgbọ elu mgbake maka ụmụ amaala UK bụ ndị hụrụ onwe ha ka ha rapaara na mba ọzọ n'ihi mmachi ahụ.
Nnukwu onye ọrụ ezumike TUI ekwenyela na ya na gọọmentị Moroko kwurịtara maka ịkwaga, wee kwuo na ụlọ ọrụ ahụ na -arụ ọrụ na ndị ahịa ịhazi ọpụpụ ha na mba North Africa.
Mkpebi igbochi njem n'etiti UK na Morocco na-abịa dị ka ndị ọrụ Britain na-edekọ ihe karịrị ikpe 40,000 COVID-19 kwa ụbọchị, mba ahụ kwukwara ọnwụ kachasị otu ụbọchị site na coronavirus kemgbe March.
N'ime izu abụọ gara aga, UK akọpụtala ikpe COVID-19 ọhụrụ karịa France, Germany, Italy na Spain jikọtara ọnụ.
Onye isi otu nche anwụ nke NHS Confederation, Matthew Taylor, adọla aka na ntị na UK “na -asụ ngọngọ na nsogbu oyi,” na -ahapụ ọrụ ahụike “na nsọtụ.”
Agbanyeghị, gọọmentị UK ajụla oku iji mejuputa mgbochi COVID-19 n'okpuru '' atụmatụ B '' COVID ya, na-ewepụ aro ọ bụla nke mkpọchi n'oge oyi.
Mmelite NASA ọhụrụ na mwepụta na Docking nke SpaceX Crew…
Amachibidoro usoro iwu mgbochi na nkpuchi na Romania n'etiti ...